အညာမြေ: Android မှာ မြန်မာဖောင့်မသွင်းပဲ၊ မြန်မာဆိုဒ်တွေ ဖတ်လို့ရပါပြီ
Android မှာ မြန်မာဖောင့်မသွင်းပဲ၊ မြန်မာဆိုဒ်တွေ ဖတ်လို့ရပါပြီ
ဖုန်းထဲက ရှာမယ်ဆိုရင် android market ထဲမှာ myanmar browser လို့ရှာရင် တွေ့ပါတယ်။ application နာမည်က 1st myanmar browser ပါ။
market link ပါ အဆင်မပြေမ တခြားကနေတင်ပေးပါမယ်
1st Myanmar Browser is Burmese fonts(Zawgyi-One & WinInnwa) supported android browser.[✔] No need root user access.
Posted by anythar at 23:26